DAAWO: Khudbadda Musharrax Siciid Deni “Waxaan ballanqaadayaa Lacag SH. Soomaali ah oo qiimo leh” – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
DAAWO: Khudbadda Musharrax Siciid Deni “Waxaan ballanqaadayaa Lacag SH. Soomaali ah oo qiimo leh”
May 12, 2022 Xuseen 32
Shilling somaligii aad aastay miyaad dib u soo nooleyn kkkkk
Beenlow ma xishooda ah ayaad tahay uhuuru iyo amiirka Emirate ka miyaa kusoo qorey qoraalkan kkk
Masha Allah – mugdi iyo iftiin isku mid maahan, been iyo run masinna, rajo iyo quusna isku waddo laguma gaaro! Waxaan marag ka ahay inuu soo jeediyay ballanqaad laysku halayn karo oo leh “Tixraac run ah” Guul iyo Gobanimo. Insha Allahu Isniin Waxaan halkaan soo galinayaa martiqaad Dhammaan Jaaliyadda Reer Puntland UK loogu dabaaldagayo guusha Puntland iyo gabi ahaan Somalia 🇸🇴. Hunguri xumo iyo xin walal god madow ayay ku galisaa kaamase saarto. Xala dhalay iyo walal adigey kugu haboon tahay waxaan ahayn guul laguma gaaro. Allah inaxafido meelkasta aynu joogno🤲🤲🤲
Afkaaga caano geel oo lis ah lagu qabay
Beentii ugu waynayd ee musharax sheega waxay ahayd deni oo yiri naag fool ku qabatay safkii dheera ee doorashada puntland dabadedna ciidamada ay isbiltaal geeyeen markii dhashayna dib loogu soo celiyay safkii doorashada si ay u codeeyso kkkk
DENIYOW TANI BEEN DHAAFTAYE EE FADLAN
FOOSHA CIYAARTA KA DAA KKK
Balanqaadyadii Puntland uu ka sameeyey maxaa u qabsoomay?
1 dhanka amniga waxaa puntland gaartay meeshii ugu hoosaysay. GRW aqalka odayaasha weerar dad ku dhenteen baa kandhacay, BOSS warkeeda Cid ma seegna Gaalkacyo xaalkeeda waa ognahay.
2. Shilin Somaligii waa lajoojiyey in laga qaato PL. Maamulka maaliyaddu waxay dadka ku amreen in ay canshuurta Dollar ku keenaan wixii qaylo dhaan dhacday waa ogayn.
3. Wadajirka umadda iyo beelaha walaalaha ah meeshay Kala marayaan iyo siday ukala erdhoobeen waa aragnaa.
Isku soo duub “NIN HOOYADII HAR U JIIDI WAAYEY HABAR KALE UMA JIIDO”.
Waxaa si gaar ah ii khusaysa khudbada Deni marka laga reebo midda Farmaajo. Deni wuxuu ku celceliyay mudnaanta Dimuqoraadiyada markaasuu hadana yiri waxkasta waxaan waa fijin shareecadda Islaamka. Shareecadda waa Rabbaani,Dimuqoraadiyadana waa damac Insaani marka siduu isu waa fijin karaa??These two are on the opposite polar ends. Waxaa kale e nacnacda khudbadooda kasoo qaad maleh.
Waxaa si gaar ah ii khusaysa khudbada Deni marka laga reebo midda Farmaajo. Deni wuxuu ku celceliyay mudnaanta Dimuqoraadiyada markaasuu hadana yiri waxkasta waxaan waa fijin shareecadda Islaamka. Shareecadda waa Rabbaani,Dimuqoraadiyadana waa damac Insaani marka siduu isu waa fijin karaa??These two are on the opposite polar ends. Waxaa kale e nacnacda khudbadooda kasoo qaad maleh.Dimuqoraadiyada waxay masaxdaa xuduudaha Rabbaaniga ah e qoyska,justiceka, way promotion of dhaqan xumada Gays right iyo wasakh badan. Viva Somalia.
Dimuqraadiyaddu Waa go aan qola walbana sidey donto ooy raalli is isaga tahay ayay ugu dhaqantaa. Waana lawaafajin karaa shareecada Islamka
Waxan ula jeedaa Dimuqraadiyaddu Waa go aan wadaag
J, haashim @@
Aqli yarida iska dhaaf wax walbo oo dadku isku raacaan lakiin ilaah raali ka aheyn waa XAARAAN ee deni warkiisa waa sidii nin yiri “hilbaha doonfaarka waxaan u karin si xalaal ah”.
Deni beentiisa waxay gaartay xukunka eebe iyo democracy ayaan miday nayaa kkkk waa yaab !!
Warkiisa deni waa wax sheeg ama waxaad sheegto ha waayin kkkkk
Ee waxaa u dhaantay in uu runta sheego oo yiraahdo waxaan u tartamayaa in aa farmaajo kursiga la dhaafiyo kkkkk
Saciid Dani tallaabooyinkaas uu dalka uyaboohay giddigood Puntland ayuu kusoo buriyay, shuruucda iyo dowlad-wanaagga uu ballanqaadayna dhammaantood Puntland ayuu jaa kagasoo tuntay. Bal yaboohisa kubbeegan 6:58-6:00 iyo ficilladiisii baarlamaanka Puntland iyo Boosaaso isqabadsiiya.
Dhibta Dani ku gadaaman ayaa ah inuu jaa Puntland sixun ugusoo guuldarreystay hoggaaminta uu dalka uyaboohayo, sidaas aawadeedna uu isu muujiyay nin lasoo tijaabiyay oo hoggaaminta uu ballanqaadayana lasoo arkay waxa ay tahay.
Aniga Dani ayaa raggaas kale iiga sokeeya marka ay abtirsiga noqoto, laakiin damiirkaygu imasiin karo inaan dalka iyo kheyraadkiisa ku aamino nin degelkeenna soo baylihiyay oo dhiig sokeeyena si macnadarro iyo xaqdarro ah ku daadiyay ee aan katoobadkeenin.
Dani haddii uu Islaamnimo la iskudhaqo dan kaleeyahay, Puntland ayay kamuuqan lahayd. Siyaasi xil raajicinayana waxwalba waa laga maqlaa, waxa uu yahayse maqarsoona.
Soomaalida waxaan ku oranayaa sidan: marka ay hoggaan hayin ah noqoto, maanta waxaa lagu suganyahay marxalad adag oo aynu ku kala dooranaynno qawsaarro aan isdhaamin kooda dalku iyo kheyraadkiisu gacmahiisa ku bedbaadi karaan. Nin iyo reer hebel jecleysi way kaweyntahay maanta.
Maanta oo kale caqliga ayaa lakaashadaa e caadifad reereed lama miciinsado.
Dani waa madaxweynaha xiga ee 25 may iman doona, farmaajo qudbaddiisii waa lagu hurdooday, dhadhan malahay dhammaanteedna beentii dadka somaliyeed horay ugu sheegay ayeey daba socotay mana jiro xibin baarlamaan oo lagu qancin karo dooro beenloow qaain ah oo ay arkaysaan lacag waa qaadasho codkuna waa dani.
@@@ J Hashim,
Qolo Kale wax naga khusaya malaha e noo sheeg sida Dimoqoraadiyada Dalka Somaliya la isu waa fijin karo? Maxuu yahay go’aan wadaaga aad ka dhawaajisay?Aas aasiga Democratic processka waa damaca Insaanka,Ma sidaa ayaa adiga sax kula ah ?
Muhiimadda Dimuqraadiyaddu Waa xorriyad qofwalba, cabburin la’aan, helitaanka waxa muwaadinku xaq uleeyahay oo amnigu ugu horeeyo. Qofka xilka inuu kushaqeeyo rabitaanka shacabka. Waafajinta Shareecada Islamku waxay noqonaysaa ayadoo intaa aan soo sheegay lagu beys gareeyo diinteena E.g. wixii aysan diinteenu ogoleyn cidna xaq uma yeelanayso. Mahadsanid
@@@ J Hashim,Hadii waxa Dimuqoraadiyada fasaxday waafaqayso Shareecada oo Shareecada wax ku cabirsysid maxaad Dimuqoraadiyada ku fali?Illaa Diintii ayaaba Fasaxday xuriyadda qowlka iyo Afkaarta kala duwan xuduudna u sameeysay.
Ninyahaw ka joog taraaraxa e soo noqo e Istigfirullaah soo qor!
Waa cilmaani aan cilmi badan laheyn hadana raba in uu difaaco wax uusan garaneyn .
Allah kucafiyo cilmaani iyo xaasid midna maahi. Sidii kitaab buurna uma hadlo. Bayska dhaqankeenu Waa inuu sharecada ahado maxaa ku durtay. Dictatorship haddaan diiday cilmaani miyaan noqonayaa. Sicilmiyeysan udood AMA iska aamus
kkk AWLAL iyo ALLY M
marna waxaad qiraysaan in dimuqaradiyada ay kasoo askuntay islamka marka kalena waxaad leedihiin waa dhaqan gaalo oo islaamiyada ka fog.
Dowlada islaami ah waxaa u dambeyey kuwii ay hogaaminayeen afartii amiirul muuminiin ee kala ahaa Abu Bakar, Omar, Osman iyo Ali. kuwii ka dambeeyey waxay ahaayeen Boqoro iyo amiro oo ah fusuq…. sida kuwa hada ka taliya sacuudiga iyo dhamaan wadamada muslika… oo laguma tilmaami karo dowlado islaami ah ama dimoqaradi ah. xukunkoodu’na laguma matali karo dowlad islaamka waafaqsan.
Dunida xadirka ah kama jidho dowlad islaami ah ee u dhiganta tii ay hogaaminayeen afarti khalifa. Iran ayaa ugu dhow islaamnimo… iyo kuwa ku dhaqma dimuqaradiga sida Turkiga, Indonesi iyo malaysia…. inta kale waa boqortooyo iyo Total dictatorship oo aan meelna loogu matali karin islaamnimo.
madaama ay suurtagal noqon karin in la dhiso dowlad islaami ah oo u dhiganta tii ay hogaaminayeen afrtii khalifa… waxaa somali u haboon in ay qaadaan wadadii ay qaadeen turkiga iyo malaysia iyo indonesia.
Riyada iyo Qarowga lagu jiro waa in laga baxo oo dunida lala jaan qaado.
JF KENNEDY ma dhamaysan dugsiga sare hadana waxuu ka galay tariikhda Amrrica baal dahabi ah. when it comes to leadership what matters the most is intellegence and sense of humanity not a formal education. Henry Ford built an empire which is is the best in the work yet he never sat in a classroom his entire life. Deni has the intellegence to deal with maryooley.
Saaxiib, aqoonyahan baad tahay, xeer goshiyeed ayaana dhigaya in aqoonyahannadu marka ay is raddinayaan uu midba markahore qummaati udhaado xagalka uu kan kale doodda kasoo abbaaray iyo fasirka uu kan kale ka bixiyay qodobka mise masalada la isku hayo.
Inaad xusuusantahay mooyi e, markasta oo aan baabkan ‘dimuqraaddiyadda’ kahadlayo si cayiman ayaa waxaan u adeegsadaa tilmaanta “Dimuqraaddiyadda Galbeediga”, sababta oo ah inaan ogahay in macnaha iyo murtida magaca ‘dimuqraaddiyad’ ay kuwaas kasii facweynyihiin oo fasiraad tooda ka duwanna wato.
Ereygu waa Af-Giriig, macnihiisa iyo murtidiisana saxda ahna waa ‘nidaam iyo hannaan rabitaanka mujtamaca mise bulshaweynta salka kuhaya’. Ma aha fasirka gurracan ee ay reer Galbeedku umaldahdeen ee ah ‘aqlabiyadda wadareed’ (majority rule).
Sidaas aawadeed, macnaha iyo murtida asalka ah ee magaca ‘dimuqraaddiyad’ Islaamka ayaa kuhorlahaa oo lagana dhaxlay, adiguna sida muslimiinta badankooda waxaad u qaadatay inaan ka waday macnaha gurracan ee ay reer Galbeedku ufasirteen.
Haddaba, waxaad ogaataa inay dunidu xadaaradda Islaamka lajaanqaadday oo muslimiintu mustawaagoodu iyo maqaamkoodu kasii sarreeyo inay nidaamyo iyo dhaqamo kahooseeya oo kasiiliita lajaanqaadaan. Jumladdaada ugu dambeysa waa gef iyo qadaf e ka noqo fadlan.
Markale ayaad qalad xun kudhacday, sida ka cad dooddaada aad J.F.Kennedy kuhalqabsatay. Haddaba, aan kusaxo e jawaabtan iga guddoon.
Michael H. Hart oo ah aqoonyahan iyo qoraa sare oo Kristaan Mareykan ah ayaa buug uu qoray oo halkudhiggiisu yahay ‘The 100 Most Influential People of all Time’ waxaa uu qiray sidan soosocata:
“It is this unparalleled combination of secular and religious influence which I feel entitles Muhammad (SCW) to be considered the most influential single figure in human history.”
Waxaa boqolkaas uu tiriyay kamid ahaa Nebi Ciise iyo Nebi Muuse (Caleyhuma Salaam) iyo inta ay reer Galbeedku kudhaartaan sida John Kennedy-ga adiga kucajabiyay.
Walaalayaal, diintiinna iyo taariikhdeeda barta oo soo dhuuxa inta aydaan Rabbi (SWT) iyo muslimiinta wax og hortooda isku ceebeynin.
@@Qardafui,Saaxib you need to know when it comes to Allah’s laws human being have no choice and certainly Muslims have an obligation to obey. Just because there is no Islamic government in this modern day that doesn’t remove Allah’s law from us Muslims.Freedom that Allah gave to us is wide and dar encompassing than any humanly laws that shift constantly with time.we see countries that abolished death penalty recently,what about those who have been executed before while now same crime doesn’t warrant death penalty?These above points are few examples to think about.
As for Indonesia do you know they prohibited Allah’s name to be mentioned institutions.I cannot Recall but they wanted Allah called in local language instead of the actual Allah.Its our failure but not the Shariica.
Brother think deep.
sharafta iyo karaamada ayaa ilaahay ka qaaday, waryuu la hadlayaa cuqdad qabuhu.
puntland shacabkeedii haraad iyo gaajo ayey la silicsan yihiin markuu lacagtii dollar ka dhigay shillin soomaaligiina u baabi’iyey. keliya in uu dollarka xamar la soo aado oo laaluush ugu bixiyo. wax kasta oou halkaa ka sheegay been ayuu ka sheegay dhagar qabuhu.
1. Mgaaladuu ka soo jeeday Qardho ayaa dooran weydey markaasuu somaali hortegayaa oo leeyahay ha la i doorto.
2.Gudoomiyihii doorashooyinka ayaa isu casilay markuu ku yiri” doorashada ii boob”
3. Xildhibaano wada naas iyo nikaax ah ayuu xamar la soo aaday shacabka puntlandna ayan raali ka ahayan.
3. musuqmaasuq iyo eex wuxuu puntland ka sameeyey bal eega.
4. carruur iyo ciroole ayuu bosaaso ku soo laayey dhagar qabahu ayna ugu danbeysey nabadoon Yassin oo uu harcad shafka ka toogtay fikirkiisa uu qabo darteed.
5. Ali xoosh ma qarsan oo hotel martisoor isagoo fadjiya ayuu khayre u ololeynayey aaarnshaydaanta uu ka tirsan yahay darteed xildhibaan ayuu mar labaad noqday isagoo og in aanu u codeyneyn halka islaan bashiir oo yiri war tolkay waan u xaqsoorayaa ku xurmayn waayey labadii kursi ee cumar mohamud kanahuleelay garowe isagoo fara maran
soomaali ceeb ayey ku tahay in nin noocaasi yiraahdo madaxweyne ayaan u tartami.
Waxaa tahay jaahil Navas ah oo Caadifad qabiil nacayb kabuuxsamay
Dani is a great present of puntland
Waryarahe book dhan oo comment to ah
Maxaay tahay war is ku xishoda oo dib ilahay
Ugu so noqda wax gacantiina ku jira Ma jiran
Tooba ya rabi dhaha
MAASHALAH DENI WAA MASUUL AY KA MUUQATAY IN LAGU AAMINI KARO MASIIRKA DALKA.
KHUDBAD MIISAAMAN OO KOOBEYSA INUU BALAN QAADO INTA UU QABAN KARO OO GACANTA UGU JIRA EE MA BALAN QAADIN SIDA FARMAAJO GAALO AYAA BILLION LACAG INAGA CAFIN DOONTA.
IS BAR BAR DHIG DENI IYO FARMAAJO:
1) DENI MARKUU PUNTLAND QABABAYAY GAALKACYO IYO BOOSAASO MASAAJIDDA LAGUMA TUKAN JIRIN SHABAABNA BEECMUSHTARKA CABSHUUR AYAY KA QAADI JIREEN.
MAANTA GAALKACYO BOOSAASO WAA KA SIFEEYEY SHABAAB.
1) FARMAAJO MARKUU XAMAR LA WAREEGAYAY AFGOOYE IYO BALCAD XILDHIBANADA BAABURTOODA AYAY KU TAGI JIREEN SHABAABNA MEELO FOG FOG AYAY KU DHUUMAN.
5 SANO KADIB XUKUNKII FARMAAJO
SHABAAB DEKEDDA XAMAR IYO SUUQYADA XAMAR AYAY CANSHUUR KA QAATAAN.
AFGOOYE IYO BALCAD XILDHIBANADA MA TAGI KARAAN XAGGA ARIMAHA AMAANKA WAA KAAS.
2) DENI AYAA BOOSAASO WEERARAY WAA BEEN
DENI SARAAKIIL UU BEDELAY AYAA DIIDAY OO GANTAALO LA DHACAY XAAFADAHA MAGAALADA DENINA WAA KA NOQDAY ISAGOO DADKA U NAXAYA.
2) FARMAAJO YUU XASUUQAY:
a)CIIDANKII CABDIRAXMAAN CABDI SHAKUR
b) REER BAYDHABO
LABADAA NIN MIDKEE AH DAMBIILE?